Chii Chinonzi Gungwa Romoto? Rakafanana Here Nehero Kana Kuti Gehena? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chavacano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuAmerica Myanmar Norwegian Nzema Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Chii Chinonzi Gungwa Romoto? Rakafanana Here Nehero Kana Kuti Gehena?
Mashoko okuti gungwa romoto anoreva kuparadzwa zvachose. Ndizvo zvimwe chetezvo neshoko rokuti Gehena, asi zvakasiyana nerokuti hero, nekuti iri rinoreva guva rinovigwa vanhu.
Mavhesi mashanu eBhaibheri anotaura nezve“gungwa romoto” anoratidza kuti iri igungwa rokufananidzira. (Zvakazarurwa 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) Zvinhu zvinotevera zvinokandwa mugungwa romoto:
Dhiyabhorosi. (Zvakazarurwa 20:10) Dhiyabhorosi haasi munhu wenyama saka hazviiti kuti atsve nemoto.​—Eksodho 3:2; Vatongi 13:20.
Rufu. (Zvakazarurwa 20:14) Harusi chinhu chinobatika, asi runofananidzira kusakwanisa kuita chero chii zvacho, kureva kusava noupenyu. (Muparidzi 9:10) Hazviiti kupisa rufu nomoto.
“Chikara” uye “muprofita wenhema.” (Zvakazarurwa 19:20) Sezvo izvi zviri zvinhu zvokufananidzira, hazvingavi nemusoro here kuti titi gungwa razvinokandirwawo nderekufananidzira?​—Zvakazarurwa 13:11, 12; 16:13.
Chiratidzo chinofananidzira kuparadzwa zvachose
Bhaibheri rinoti gungwa romoto “rinomirira rufu rwechipiri.” (Zvakazarurwa 20:14; 21:8) Rufu rwokutanga rwunotaurwa muBhaibheri rwakakonzerwa nekutadza kwaAdhamu. Rufu urwu haruna simba nokuti kuchava nerumuko uye pakupedzisira Mwari acharubvisa.​—1 VaKorinde 15:21, 22, 26.
Chinhu chinenge chapinda mugungwa romoto rokufananidzira hachifi chakabudamo
Gungwa romoto rinofananidzira rufu rwechipiri. Kunyange zvazvo ruchifananidzirawo kusakwanisa kuita chero chii zvacho, rwakasiyana nerwokutanga nekuti Bhaibheri hapana zvarinotaura nezvokumutswa kwevanhu vanofa rufu rwechipiri. Somuenzaniso, Bhaibheri rinoti Jesu ane “kiyi dzehero uye dzorufu,” zvichiratidza kuti ane simba rokumutsa vanhu vanofa nemhaka yechivi chaAdhamu. (Zvakazarurwa 1:18; 20:13, King James Version) Asi hakuna munhu ane kiyi yegungwa romoto kunyange Jesu chaiye. Gungwa iri rokufananidzira rinoreva chirango chokuparadzwa zvachose.​—2 VaTesaronika 1:9.
Gehena Rakafanana neMupata waHinomu
Shoko rokuti Gehena (muchiGiriki geʹen·na) rinowanika ka12 muBhaibheri. Rinofananidzira kuparadzwa zvachose kungofanana nezvinorehwa negungwa romoto. Mamwe maBhaibheri anoshandura shoko rokuti Gehena achiti “hero.” Asi Gehena rakasiyana nehero (muchiHebheru sheʼohlʹ, muchiGiriki haiʹdes).
Shoko rokuti “Gehena” rinoreva “Mupata waHinomu,” uyo waiva kunze kweJerusarema. Munguva yakanyorwa Bhaibheri, vagari vemuguta iri vairasira marara mumupata uyu. Vaiita kuti moto urambe uchibvira uchipisa marara uye honye ndidzo dzaizopedzisa zvainge zvisina kutsva.
Jesu akashandisa shoko rokuti Gehena achireva kuparadzwa nokusingaperi. (Mateu 23:33) Akati muGehena mune ‘honye dzisingafi uye moto usingadzimwi.’ (Mako 9:47, 48) Saka apa aitsigira zvaiitika muMupata waHinomu nezviri muuprofita hwaIsaya 66:24 inoti: “Vachabuda votarira zvitunha zvevarume vainditadzira; nokuti honye dziri pavari hadzizofi uye moto wavo hauzodzimwi.” Mufananidzo waJesu unoreva kuparadzwa zvachose kwete kurwadziswa. Honye nemoto zvinoparadza zvitunha, kwete vanhu vapenyu.
Bhaibheri haritauri kuti vanhu vari muGehena vachamutswa. “Gungwa romoto” uye “Gehena romoto” zvinofananidzira kuparadzwa nokusingaperi.​—Zvakazarurwa 20:14, 15; 21:8; Mateu 18:9.
Mashoko okuti “vacharwadziswa masikati nousiku nokusingaperi-peri” anorevei?
Kana gungwa romoto richifananidzira kuparadzwa, nei Bhaibheri richiti Dhiyabhorosi, chikara uye muprofita wenhema “vacharwadziswa masikati nousiku nokusingaperi-peri”? (Zvakazarurwa 20:10) Pane zvikonzero 4 zvinoratidza kuti kurwadziswa uku ndekwokufananidzira:
Kuti Dhiyabhorosi arwadziswe nokusingaperi, zvinoreva kuti anofanira kuramba ari mupenyu. Zvisinei, Bhaibheri rinotaura kuti achaparadzwa, kana kuti achaurayiwa.​—VaHebheru 2:14.
Upenyu husingaperi, hachisi chirango asi chipo chinobva kuna Mwari.​—VaRoma 6:23.
Chikara nomuprofita wenhema zvinhu zvokufananidzira saka hazvikwanisi kurwadziswa.
Mamwe mashoko ari muBhaibheri anoratidza kuti kurwadziswa kuchaitwa Dhiyabhorosi kunoreva kuti achaparadzwa zvachose.
Shoko rakashandiswa muBhaibheri richireva kurwadziswa rinogonawo kureva kutadziswa kuita chimwe chinhu. Somuenzaniso shoko rechiGiriki rinoreva “vanhu vanorwadzisa” rakashandiswa pana Mateu 18:34, mune dzimwe shanduro rinonzi “varindi vejeri.” Izvi zvinoratidza kuti kurwadzisa kwakada kufanana nokutadziswa kuita chimwe chinhu. Saizvozvowo, nyaya imwe chete inotaurwa pana Mateu 8:29 uye Ruka 8:30, 31 inofananidza kurwadziswa ne“gomba rakadzikadzika,” iro rinofananidzira rufu. (VaRoma 10:7; Zvakazarurwa 20:1, 3) Mubhuku raZvakazarurwa, panenge pachitaurwa nezvokurwadziswa panenge pachifananidzira chimwe chinhu.​—Zvakazarurwa 9:5; 11:10; 18:7, 10.
Bhaibheri Upenyu Uye Rufu Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
Dzidza kuti Bhaibheri rinoti vakafa vari kupi uye kuti nei vanhu vachifa.
Chikara Chine Misoro 7 Chinotaurwa Pana Zvakazarurwa 13 Chinomiririrei?
Chikara chine simba, chiremerera uye chigaro. Ndezvipi zvekare zvimwe zvinojekeswa neuprofita uhwu?
Chii Chinonzi Hero? Inzvimbo Inotambudzirwa Vanhu Nokusingaperi Here?
Mwari Anopisa Vanhu Mugehena Here?